Covid-19 – Page2– Shwe Sar
ကျနော်တို့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေထဲမှာ Positive ဖြစ်သူတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာ ရက်ပိုင်းရှိပါပြီ။ ဒီတစ်ပါတ်က စလို့ ကျနော်တို့ ဝန်ထမ်းတွေ ပြောင်းလဲလာတာ သိသာပါတယ်။ အကာ အ ကွယ်တွေကို အချိန်ပြည့် နီးပါး ဝတ်ဆင်လာတာ သိသာပါ တယ်။ […]
ကိုဗစ် နဲ့ စားဝတ်နေရေး ကြိုက်တာရွေး ဆိုတဲ့ အခြေအနေကို ကြုံတွေ့ရတော့ မှာလား?
ဒီလိုနေရာကို မရောက်တော့ဘူး လို့ လျှော့တွက်ထားမိတာ သိပ်ကို မှားသွားပြီ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့တွေ ကိုဗစ်ရန်က ကင်းဖို့ဆိုတာ အလုပ်မလုပ်ပဲ အိမ်ထဲအောင်းနေမှသာ လွတ်နိုင် မှာ ပါ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ မတောင့်ခံနိုင်ကြတော့ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် အလုပ်တွေလုပ်ရင်း […]
အခုရောက် လာသူအားလုံးဟာ Positive အဖြေထွက်ပြီးသူ များဖြစ်ပါတယ် ။ အမျိုးသမီး ၂၇ ဦး၊ အမျိုးသား ၂၇ ဦး စုစုပေါင်း၅၄ယောက်ပါ။ လူငယ်တွေများ တဲ့ ပမာဏကတော့ ၈ ရ က်ေ န့နော […]
လတ်တလော လူတွေ အရမ်း သိချင်နေကြတဲ့ ကိုဗစ်ဘယ် မှာ စစ်လို့ရမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအကြောင်း
By Shwe SarPosted on November 23, 2020
COVID ဘယ်မှာစစ်ရပါ့ Call centre ကို ခုတလော အမေးများပြီး အဖြေရခက်တဲ့ မေးခွန်းက ‘ပိုးရှိမရှိဘယ်မှာစစ်လို့ရမလဲ’..ပိုးရှိမရှိ အရမ်းစစ်ချင်ကြတဲ့ လူ နှစ်အုပ်စုရှိပါတယ်.. ပ ထ မအု ပ်စုက အလုပ်ကိစ္စနဲ့ခရီးသွားချင်တဲ့လူတွေ နဲ့ ဒုတိယအုပ်စုက […]
ကူးစက်မှု ကာကွယ်ထိန်းချူပ်ရေး အရေးကြီးသလား ကိုဗစ် ကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်ရန် “မေတ္တာရပ်ခံ” “ညွန်ကြားချက်ထုတ်” မလုံလောက်ကြောင်း ကူးစက်ခံရသည့် ကိန်းဂဏန်းများနှင့် ဒေသ အနှံ့  (ကျေးလက်တောရွာအထိ) ကူးစက်ခံနေရမှု ညွန်ပြနေပါပြီ။ ကုသဆေး မရှိသေးသော်လည်း ဖြစ်နိူင်ခြေ […]
ဗန်းမော် ကွန်ပျူတာ ကျောင်းသားတွေ ထွင်လိုက်တဲ့ အပူချိန် တိုင်း ပုံရိပ်ကင်မရာ
By Shwe SarPosted on November 19, 2020 November 19, 2020
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်မြို့နယ်က ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်က ကျောင်းသားတွေ တီထွင်လိုက်တဲ့ ကိုဗစ် ရောဂါစစ်ဆေးတဲ့ အပူချိန်တိုင်းကင်မရာအား နေရာသုံး နေရာမှာ လှူဒါန်းခဲ့တယ် လို့ သိရပါတယ်။ ကင်မရာရှေ့ကို ဖြတ်သန်း ရောက်ရှိလာသူတွေရဲ့ ပုံရိပ်ကို ကင်မရာက ဖမ်းယူပြီး အပူချိန်ကိုတိုင်းတာတွက်ချက်နိုင်တာကြောင့် […]
ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်များသည် ခံတွင်းဆေးရည် နှင့် ထိတွေ့ပြီး စက္ကန့် ၃၀ အတွင်း သေဆုံးသွားသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိထားကြောင်း သိပ္ပံ ပညာဆိုင်ရာ လေ့လာမှုတစ်ရပ် က ဖော်ပြသည်။ ဆေး ဆို င်များ၌ အလွယ် တကူ […]
အခုက ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ပေါ်လစီမျိုး မဟုတ်တော့ပဲ စည်းစနစ် နဲ့ ဖွင့်ချပါတော့မယ်။ မကြာခင်မှာ ၂ပတ် အိမ်မှာနေခိုင်းမယ် ရောဂါကူးစက်မှု စက်ဝန်းကို ရသလောက်ဖြတ်မယ်။ ဒါပြီးတာနဲ့ ဖွင့်ချတော့မယ်။ စားေ သာ က် ဆိုင်တွေ၊ ခရီးသွားလာမှုတွေ၊ ဘာသာရေးဌာနတွေ […]
အနံပျောက်တာ နဲ့ Q ဝင်ပါ (ရပ်ကွက်ဆေးခန်း မှာ ဆေးသွား ထိုးပြီး အနံ့ပြန်ရအောင် မလုပ်ကြပါနဲ့)
By Shwe SarPosted on November 18, 2020
“ဟဲ့ မိသက်! … အနံ့ပျောက်တာများထူးထူးခြားခြား Q တွေ ဘာတွေ ဝင်လို့အေ။ တုံးချက်။ ဟိုလမ်းထိပ်က ဆေးခန်းသွားပြချေ ။ ဆရာ ဆေးထိုး ဆေးပေးလိုက်တာ ငါဆို (၃) ရက်နဲ့ အ နံ့ပြန်ရနေပြီဟဲ့ […]
ကိုဗစ် ကာကွယ်ေ ဆး ဈေးနှုန်း… ( ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး တလုံးကို မြန်မာငွေ ၄၀၀၀ ( လေးထောင်ကျပ် ) နဲ့ ရရှိ နိုင့်မယ့် အခြေအနေ ..)
အရင်ဆုံးကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေရဲ့ #အကြမ်းဖျင်းဈေးနှုန်းကိုပြောမယ်။ ပြီးမှ သယ်ယူပို့ဆောင်ရမယ့် အပူချိန်ကိုပြောမယ်။ Moderna ရဲ့ mRNA ကာကွယ်ဆေးက တစ်လုံးကို အမေရိ က န်ေ ဒ်ါလာ $37 ကျမယ်။ အကြမ်းဖျင်း မြန်မာငွေ 50000 လောက်ရှိမယ်။ […]